महिलाले पुरुषमा खोज्छन् यी ५ कुरा ! प्रत्येक पुरुषले थाहपाउनै पर्ने ! – live 60media
महिला र पुरुषको विचको स’म्बन्धको शुरुवात सबैभन्दा महत्व पूर्ण हुन्छ । महिला सामान्यतया पु’रुषमा केही कुरा खोज्छन् । यी कुरा पाए भने महिला पु’रुषसँगको स’म्बन्धमा खुशी र स’न्तुष्ट रहन्छन् ।
के कुरा चाहन्छन् त पु’रुषमा महिला ? मुस्कान:-राम्रो लुक र पहिरन पछि महिलालाई चाहिन्छ हँसिलो अनुहार । कुनै पनि पुरुष हँसिलो अनुहारसहित प्रस्तुत हुन्छ भने उप्रति महिला आकर्षित हुन्छे।
लुक र आकर्षण:-हुन त दीर्घ स’म्बन्धमा स्वभाव प्रधान हुन्छ तर आफ्नो पुरुषको आकर्षक लुक र ब्यक्तित्व पनि महिलाको चहाना हो । पुरुषको स्किन कलरले समेत महिलालाई प्र’भाव पार्ने कुरा भएको बताइन्छ । स्वभाव:-कुनै पनि स’म्बन्धको शुरुवात बाहिरी सुन्दरता बाट हेरिन्छ तर स’म्बन्ध लम्बिँदै जाँदा मानिसको स्वभाव हेरिन्छ ।
खासमा स’म्बन्धको आयु सुन्दरताले होइन स्वभावले निर्धारण गर्छ ।एक महिलाले पुरुषबाट सबैभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने भनेको राम्रो स्वभाव हो । लामो सम्बन्धमा महिलालाई सुन्दरताले भन्दा पुरुषको स्वभावले आक र्षित गर्छ ।
ह्युमर:-यदि महिल लाई हसाउँने क्षमता छ भने तपाइँ पनि सफल पुरुष हो । किन भने महिलाहरुले आफूसँग संगत भएको पुरुषमा सेन्स अफ ह्युमर चाहन्छन् । यस्ता पुरुषले महिलामा प्र’भाव छोड्न सक्छन् ।
शा’रीरिक बनौट:-शरीरको बनौट पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि पुरुषको शा’रीरक बनौटसँग महिलाको चासो हुन्छ । एक रिपोर्टका अनुसार महिला अधिकाँश महिलालाई अत्याधिक अग्ला वा होंचा भन्दा औ षत उचाइ भएका पुरुक्ष मन पर्छन् ।
← यी राशि भएका पुरुषले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राख्छन्
भगवान जस्तै श्रीमान ! सबैले आस मा’रेकी श्रीमतीलाई यसरी ब’चाए, सलाम छ →